जसपा संसदीय दलको नेतामा महन्थ ठाकुर चयन हुँदै, चार सांसदले छोडे उपेन्द्रको साथ ! « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, २० बैशाख । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने कि विस्थापन गर्ने भन्नेबारे जसपामा दुई धार देखिएको छ । ओलीलाई साथ दिनुपर्ने पक्षमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो छन् भने ओलीलाई कुनैपनि हालतमा विस्थापित गर्नुपर्ने पक्षमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई छन् । जसपाको संसदीय दल र कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत रहेको दाबी गरिएको छ । तर, ठाकुर पक्षले भने अहिले नै बहुमत कसको पक्षमा छ ? भनेर परीक्षण भईनसकेको दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यही बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेको अवस्थामा जसपाले ठाकुरलाई नै संसदीय दलको नेता बनाउन लाग्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । जसपामा ३२ जना सांसद छन् । त्यसमध्ये ठाकुर पक्षसँग कम्तिमा २० जना सांसद पुग्ने दाबी गरिएको छ । तर, यादव पक्षले भने कुनैपनि हालतमा आफूहरु नै बहुमतमा रहेको जिकिर गर्दै आएको छ । यसअघि यादव पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने भन्दै १८ जना सांसदको हस्ताक्षर गरेर राखिसकेको पनि बताईएको छ । File Photo/ReportersNepal